DebitCoin စျေး - အွန်လိုင်း DBTC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို DebitCoin (DBTC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ DebitCoin (DBTC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ DebitCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
DBTC – DebitCoin
Market ကဦးထုပ်: $45 362.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ DebitCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
DebitCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
DebitCoinDBTC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00162DebitCoinDBTC သို့ ယူရိုEUR€0.00138DebitCoinDBTC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00124DebitCoinDBTC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00149DebitCoinDBTC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0147DebitCoinDBTC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0103DebitCoinDBTC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0362DebitCoinDBTC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0061DebitCoinDBTC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00216DebitCoinDBTC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00228DebitCoinDBTC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0364DebitCoinDBTC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0126DebitCoinDBTC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00873DebitCoinDBTC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.121DebitCoinDBTC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.275DebitCoinDBTC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00223DebitCoinDBTC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00248DebitCoinDBTC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0505DebitCoinDBTC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0113DebitCoinDBTC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.173DebitCoinDBTC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1.92DebitCoinDBTC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.63DebitCoinDBTC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.119DebitCoinDBTC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.045
DebitCoinDBTC သို့ BitcoinBTC0.0000001 DebitCoinDBTC သို့ EthereumETH0.000004 DebitCoinDBTC သို့ LitecoinLTC0.00003 DebitCoinDBTC သို့ DigitalCashDASH0.00002 DebitCoinDBTC သို့ MoneroXMR0.00002 DebitCoinDBTC သို့ NxtNXT0.132 DebitCoinDBTC သို့ Ethereum ClassicETC0.000245 DebitCoinDBTC သို့ DogecoinDOGE0.481 DebitCoinDBTC သို့ ZCashZEC0.00002 DebitCoinDBTC သို့ BitsharesBTS0.0634 DebitCoinDBTC သို့ DigiByteDGB0.0555 DebitCoinDBTC သို့ RippleXRP0.00589 DebitCoinDBTC သို့ BitcoinDarkBTCD0.00006 DebitCoinDBTC သို့ PeerCoinPPC0.00549 DebitCoinDBTC သို့ CraigsCoinCRAIG0.758 DebitCoinDBTC သို့ BitstakeXBS0.0709 DebitCoinDBTC သို့ PayCoinXPY0.029 DebitCoinDBTC သို့ ProsperCoinPRC0.209 DebitCoinDBTC သို့ YbCoinYBC0.0000009 DebitCoinDBTC သို့ DarkKushDANK0.533 DebitCoinDBTC သို့ GiveCoinGIVE3.6 DebitCoinDBTC သို့ KoboCoinKOBO0.379 DebitCoinDBTC သို့ DarkTokenDT0.00149 DebitCoinDBTC သို့ CETUS CoinCETI4.8
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 06:15:02 +0000.